Kajimirindra Info. About. What's This?
Milina fikajiana lehibe
Rafitra fitantanana votoatiny
Aterineto Fitaovam-pitahirizanangona Hardware Rindrankajy
Ny kajimirindra na koa informatika dia taranja ara-tsiansa mikasika ny fikajikajiana ny data. Ny mpahay kajimirindra dia olona manam-pahaizana aminny teôrianny fikajina ary aminny fanatontosana rafitra mikajy.
Ny atao hoe rakitra aminny kajimirindra dia firaketana fampahalalana arakisa navondrona tanaty toerana iray ary nomena anarana tokana, ary anaty maharitra toa ny kapila mateza, CD-ROM na bandy arakandriamby. Samihafa ny firafitry ny fampirimana rakitra arakaraky mpandrindra milina. Ho anny mpandrindra milina izay avy amini Linux izao ohatra dia / anja sompirana ny fototry ny rakitra na inona na inona ny isanny kapila mateza anananilay solosaina ; tsy misy izany ny ao amini Windows. Arakaraky ny isanny kapila mateza, na eo an-toerana na eo an-tambajotra, ny isanny fototra. Ny fototry ny rak ...
Ariky ny mpampita tapany ang.: semiconductor memory arika arakaratra azo ampiasaina aminny haikoriamboanaratra roafototra, ohatra Arika vakiana ihany ang.: Read-only memory Ari-tsolosaina, natao hitahiry fampahalalana na rindrankajy amy fomba vonjimaika na maharitra eo amy solosaina. Ariky ny batery ang.: battery memory, zavatra hita aminny batery nikela kadmiôma izay tsy mahatazona angovo betsaka rehefa ampiasaina matetika. Arika mora mietona ang.: volatile memory Fitahirizam-pahalalana aminny solosaina, fitaovana natao hitahiry fampahalalana.
Ny internet dia ny fitambaranny ordinatera na milina fikajiana eranizao tontolo izao aminny alalanny fifandraisana TCP/IP izay nahamora ny fifanakalozana sy fandefasana data. Fenitra
Aminny taranjanny kajimirindra, ny famaritana manarakendrika dia teknika mifototra aminny fampiasana matematika izay hahafahana mamaritra ny rafitra ary ny fandaharana. Ampiasaina aminny famisavisana rafitra, mamakafaka ny fitondrany, ary mamaritra ny tondrony aminny alalanny fampiasana fitaovana matematika mandaitra. Lazaina fa manarakendika ny famaritana aminny izy io manana rariteny, miombona anaty valam-pahaizana tokana ary aminny fahafahana manatsoaka fampahalalana ilaina avy aminy.
Ny fanakelezam-piparitahana, amin’ny kajimirindra, dia ny fananekelezana na fanesorana ny fiparitahan’ny angona ao amin’ny rafi-drakitra. Ny fanakelezam-piparitahana dia manao izay hampifanakaiky ny singan’angona ao amin’ny kapila mba hampitombo ny hafaingam-pamakiana ary mamela velarana malalaka hampahakelezana ny fiparitahan’ny rakitra hosoratana.
Ny fandaharana, amin’ny kajimirindra dia lisitra baiko hilazana ny solosaina ny zavatra tokony hataony. Amin’ny alalan’ny fandaharana ny anaovana ny zava-drehetra anaty solosaina iray. Ireo dia misy ohatra fandaharana: Ny mpitety tranonkala, tahaka Mozilla Firefox, Safari an’i Apple, na Internet Explorer an’i Microsoft dia natao hijerena pejin-tranonkala eo amin’ny Aterineto. Ny rindrankajy fiasana birao dia natao hanoratana taratasy na hanaovana kajy. Fandaharana ihany koa ny lalao video. Ny fandaharana dia tahirizina anaty kapila mateza. Rehefa mandefa fandaharana iray ny mpampiasa, dia ...
Hadisoam-pizaranarika dia fijanonan-drindrankajy fampiharana izay nanandrana namaky na nanoratra tamy faritrarika tsy mbola natokana ho azy. Rehefa mandeha ambony milina ny rindrankajy fampihana dia mila arika izay atokanny mpandrindra milina ho azy ireo. Rehefa natokana tokoa ny ampahanarika dia tsy misy fampiharana hafa afaka mamaky na manoratra eo aminilay faritrarika. Izany dia natao hiarovana ireo fampiharana aminny hadisoanny rindrankajy fampiharana hafa. Ka rehefa manandrana manakatra faritrarika tsy natokana ho azy ny rindrankajy fampiharana iray dia hitanny mpandrindra milina izan ...
Ny haranita-tsaina voatrolombelona izay ho afohezina ho AI dia sampananny kajimirindra izay mandinika ary mamelatra milina ary rindrankajy marani-tsaina. Ny AI dia taranja siantifika manan-tanjona ny manome fahafahana mamaha olana anny milina. Ny tanjonny rafitra manana azy dia mamaha ny olana ohatra ny fanaovanny olona. Ny rindrankajy efa mampiasa haranita-tsaina voatrolombelona dia ny lalao videô, ny rôbô ireo rindrankajy mampiasa lôjika tsy mazava na ireo tambajotra neorôna.
Ny milina fikajiana lehibe dia milina fikajiana fampiasaina aminny fikarohana na fandrindrana ataonny orinasa lehibe maro. Ny mampiavaka azy dia ny fahafainganany, ny halebehinny fitadidiana sy ny heriny. Azo lazaina hoe milina fikajiana 1 tapitrisa mahery mitambatra vao mitovy aminny milina fikajiana lehibe iray.
Ny atao hoe kernel dia ny "voanny" mpandrindra milina. Ny kernel no mitantana ny loharanon-karenanny solosaina ary manafaka ny fifandraisanny fitaovana sy ny rindrankajy. Manome tontolo iainana avo lenta ho anny rindrankajy ny kernel aminny alalanny famaritana faritrarika, ny fitantanana ny mpikajy, ary fifandraisana aminny asa hafa alefa eo aminilay mpandrindra milina.
Ny milina fikajiana dia zavatra noforoninny olombelona natao hikajy sy handraraha ny asa eny aminny birao na andavanandro. Ny milina fikajiana dia mihamatanjaka sy miha-matotra isanandro nohonny fandrosoana sy fivoaranny fikaroahana aminio taranja io ka mahatonga azy hampitoviana aminny sainanolombelona. Izay indraindray no antsoinazy hoe: solosaina. Manana fitadidiana sy fahalalana na programa mandrindra izany ilay milina. Ny milina fikajiana dia azo zaraina sokajy roa; eo ny Rindrankajy ary eo ny Hardware.
Ny oktety dia venty andrefesana ny data aminny taranjanny kajimirindra. Ny oktety dia bity miisa valo, izany hoe isa miroafototra valo. Ny baity, no anisanny fomba anononana ny oktety aminny teny anglisy, na dia azo ampiasaina aminny teny anglisy koa aza ilay teny octet.
Aminny kajimirindra, ny pakejy dia rakitra ahitana rakitra ilainny solosaina, ny torohay ilainny mpandrindra milina iray ho anny fametrahana ny rindrankajy iray. Araka izany ny APT, RPM ary ny URPMI dia mpitantana pakejy ho ani Linux.
Ny rafitra fitantanana votoatiny dia rindrankajy fampiharana ahafahana maneho ary mikirakira votoatiny avy aminivotoerana iray. Izy ireo matetika dia manamora ny fiaraha-miasa. Izy ireo dia niorina nanomboka taminny taona 1990. Ampiasaina matetika aminny fitantanana tranonkala toa ny blaogy, na tranonkakam-baovao na koa tranombarotra an-tranonkala izy ireo. Maro dia maro ireo orinaa ary tranonkala fivarotana mampiasa rafitra fitantanana votoaitny. Ny tanjonny rafitra fitantanana votoatiny dia hamoana ny filàna manoratra ny renifango manontolonny tranonkala, na farafaharatsiny manakely izay ...
Ny rindrankajy dia teny avy aminny teny roa soft sy ware izay midika hoe malemy sy entana izany hoe entana malemy izay mifanohitra aminny entana mafy tsy azo ahova. Eo aminny kajimirindra dia hita mazava tsara ny tsy fitoviana satria ny software dia tsy maintsy tehirizina ao anaty fitadidiana ary ny hardware dia izay entana rehetra azo tsapain-tanana. Raha ampitahaina aminny olombelona dia ny saina no software ary ny vatana sy ny loha kosa dia hardware. Ny saina tsy misy raha tsy eo loha sy vatana mitahiry azy ary dia toy izany koa ny software tsy misy raha tsy eo ny hardware mitahiry azy.
Ny rindrankajy fampiharana na hoe fampiharana, aminny kajimirindra, dia fandaharana an-kajimirindra ampiasainny mpampiasa hanatanterahana asa iray, na vorinasa madinika aminny valanasa iray. Ny mpitety tranonkala izao ohatra dia rindrankajy fampiharana iray; torakizany koa ireo mpahita aino aman-jery, na ireo lalao video. Mandeha aminny alalanny mpandrindra milina ny rindrankajy fampiharana ary mampiasa ny fahafaha-mikajinizy io.
WordPress dia rafitra fitantanana votoatiny, malalaka anoratana ny rindrakajy PHP, ary miankina aminny tahiry fototra MySQL. Ny WordPess dia volavolanasa nataonny orinasa Amerikanina Automattic, ary ampiasaina aminny fitantanana tranonkala toa ny blaogy, na tranonkalam-baovao na koa tranombarotra an-tranonkala izy io. Mifototra ao aminny lisansa ny WordPress ary manana tranokalany manokana WordPress.com. Taminny taona 2015, dia nahatratra 25% ny tranokala vita taminny WordPress maneranizao tontolo izao.
Ny hardware dia izay entana mafy rehetra azo tsapai-tanana sy hita maso namboarinny olombelona. Aminny kajimirindra dia ireo zavatra vita aminny olikaratra digital circuit na olika voafintina anaty integrated circuit IC rehetra dia sokajiana hardware.
Ny adiresin-tahiry dia haitao aminny kajimirindra izay hahatakarana ny fampahalalana ao anatinny tahiry. Ny adiresin-tahiry dia faritra manokanny tahiry izay azoana mamaky ary mitahiry data, na aminny fomba miserana na aminny fomba maharitra. Izay adiresy izay matetika dia isa feno.
Ny faingo mihevaheva dia fomba iray fanoratana ny isa tsimivaky izay ampiasaina aminny solosaina. Aminny faingo mihevaheva, ny isa iray dia ahitana famantarana s izay -1 na +1, sanda raikitra r ary fototra f izay voasanga isa feno afaka miabo na miiba i. Manome ny isa tsimivaky s.r.f i. Ny sandani f dia 2 aminny solosaina, 16 aminny solosaina antitra, 10 aminny mpikajy, na sanda hafa. Ny faingo dia ampihevahevana aminny alalani i.
Ny fihoaran-dahinkirika dia hadisoana anaty fandaharana rehefa manoratra angona anaty lahinkirika ka mihoatra ny faritraritra natokana ho anilay lahinkirika, ka lasa manitsaka ireo faritrarika manodidina. Ny fihoaran-dahinkirika dia tranga manokanny otam-pahatokianarika.
Ny PDF dia avy aminny fanalavan-teny frantsay hoe Portable Document Format izay midika hoe teny mifono ka azo entina na afindra toerana. Io pdf io dia teny vita avy aminny kajimirindra ka ampiasaina ao aminny kajimirindra na ireo pejy fanoratra. Niforony orinasa Adobe Systems taminny taona 1993 izy io. Matetika ampiasaina aminireny fanatsarana soratra ireny: sary, loko. no tena manavanana pdf.
Ny PHP, dia fiteny script malalaka, ampiasaina aminny fanamboarana pejin-tranonkala dinamika, fa afaka miasa ohatra ny fiteny rehetra dikaina aminny fomba eo antoerana, aminny alalanny fampiasana rindrankakjy aminny andalana baiko.
Rindrankajy fampiharana an-tranonkala
Aminny taranja kajimirindra, ny rindrankajy fampiharana an-tranonkala na koa fampiharana an-tranonkala dia rindrankajy fampiharana azo alefa aminny alalanny mpitety tranonkala sahala ireo tranonkala tsotra. Mipetraka eo amina lohamilina ny fampiharana an-tranonkala ary manana interfasy fifandraisana, aminny alalanny tambajotra ara-kajimirindra.
Ny Rindrankajy malalaka dia rindrankajy manana lisansa tenenina hoe malalaka manome anny mpampiasa azy ny fahefahana mampiasa azy, mihanatra momba azy, manova azy ary mivarotra na manome azy anolon-kafa, Tsy andoavam-bola ary tsy misy zavatra tokony omena mba hafahana hanao anireo zava-drehetra notenenintsika teo ambony.